जमैका मा एक हप्ता आनन्द लिनुहोस् यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | मार्गदर्शकहरू, जमाइका
क्यारिबियनमा सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्यहरूको एउटा टापु हो जमाइकाविशेष गरी यदि तपाईंलाई यो मनपर्दछ रेगा र यसका डेरिभेटिभहरू "। के तपाईं जाँदा पनि लायक छ यदि तपाईंलाई संगीत मात्र मनपर्दछ र अलिकति धुम्रपान गर्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ, यो एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो र यसले हामीलाई ती दुई शीर्षकहरू भन्दा धेरै प्रदान गर्दछ।
त्यसपछि म प्रस्ताव गर्दछु कि हामी सँगै भेला हुन्छौं त्यो हामी गर्न सक्छौं गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् र जमैकामा एक पूरै हप्ता हेर्नुहोस्। मैले अनुमान गरेको छु कि यस यात्रामा केही औपनिवेशिक इतिहास, स्वादिलो ​​खाना र पक्कै पनि क्यारिबियन तटहरू छन्। र हो, रेगे रातहरू।
2 जमैकामा गन्तव्यहरू
6 आठ नदीहरू
7 पोर्ट एन्टोनियो
यो ग्रेटर एन्टिलिसमा तेस्रो ठूलो टापु हो र यो क्युवाबाट १ 145 किलोमिटर टाढा छ र यस टापुको बारेमा केहि अरु जुन डोमिनिकन रिपब्लिक र हैतीले साझेदारी गरे। स्पेनिशले यसलाई धेरै चाँडो जित्यो तर १ English1655 मा अ XNUMX्ग्रेजीले नियन्त्रणमा लिए।
त्यहाँ यसलाई जमैका भनेर चिनिन थालियो र यसको आर्थिक क्रियाकलाप निश्चित रुपमा दासको श्रमिकको साथमा उखुको खेतीमा केन्द्रित थियो, पहिले अफ्रिकी र पछि, मुक्ति पाएपछि, चिनियाँ र भारतीय कामदारहरूसँग।
जमैकामा अंग्रेजी बोल्दछ। यसको राजधानी शहर हो किंग्स्टन र यद्यपि यो राष्ट्रमण्डलको हो, आर्थिक स्थितिले राम्रो इतिहासको खोजीमा यसको ईतिहास भरमा थुप्रै बसाई उत्पादन गरेको छ। तपाईं होशियार हुनुहोस् किनकि यसको राजधानी हिंसात्मक शहर हो जहाँ अपराध दर धेरै छ। मेरो सल्लाह होटेलहरूमा जान र टुरको वरिपरि घुम्न।
किंग्स्टन, नेग्रिल, मोन्टेगो बे, ओचो रियोस, पोर्ट एन्टोनियो। यस मुट्ठी भर गन्तव्यहरूमा तपाईं शांतिपूर्वक जमैकामा हप्ता केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ। विचार पश्चिम र दक्षिण तटहरू संयोजन गर्न हो, यो टापुको पहिलो यात्राको लागि उत्तम हो।
तपाईं नेग्रिलको सेता समुद्री किनारहरू, यसको नदीहरू र झरनाहरू र यसको माछा मार्ने गाउँहरूबाट सुरू गरेर पोर्ट एन्टोनियोमा अन्त्य गर्नुहोस् जहाँ हलिउड अभिनेता एरोल फ्लाइन छुट्टीको लागि प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो।
राजधानी लगभग बसोबास छ3मिलियन मानिस। यो पहाडहरू, उत्तरमा छ र समुद्री तटले यसलाई दक्षिणमा स्नान गर्छ। त्यहाँ धेरै गरिबी छ त्यसैले तपाईं धेरै सावधान हुनु पर्छ। जब तपाईं चालैमा निर्दोष हुनुपर्दैन।
भ्रमण गर्ने साइटहरू मध्ये एक हो डेवन हवेली। यो १ 1881१ मा निर्माण भएको हो र यो महत्त्वपूर्ण छ विरासत साइट किनकि यसले ब्रिटिशले बनाएको विशिष्ट औपनिवेशिक वृक्षारोपण हवेलीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। भित्र १ th औं शताब्दीको फर्नीचर हो र निर्देशित टुरहरू प्रस्ताव राखिन्छ। सुन्दर बगैंचामा रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू छन्। को बब मार्ले संग्रहालय यो आफ्नो पुरानो घरमा काम गर्दछ जुन अहिलेसम्म उसको परिवारको हातमा छ।
को निलो पर्वत तिनीहरू शहरको उत्तरमा अवस्थित छन् र आज तिनीहरू एक राष्ट्रीय पार्क बनाउँछन् जुन तपाईं भ्रमणमा भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं उच्चतम बिन्दुमा जान सक्नुहुन्छ र यदि तपाईंले स्पष्ट दिनमा यो गर्नुभयो भने तपाईं क्युबाको दक्षिणी तट देख्न सक्नुहुनेछ। पैदल चार देखि आठ घण्टा लाग्छ तर यो लायक छ। पहाडमा हवेली र छ स्ट्रबेरी हिलआज केबिनहरूले घेरिएको होटेल, पुरानो र सुरुचिपूर्ण औपनिवेशिक घर जुन स्पा पनि हो।
अर्को भ्रमण तपाईंले साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यो हो पोर्ट रयल, सत्रौं र अठारहौं शताब्दीको समयमा समुद्री डाकुहरूको पूर्व राजधानी। भूकम्पले १ XNUMX औं शताब्दीको अन्ततिर आधा शहर डुबायो तर तपाईं अझै देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ किल्लाहरू र घाटीहरूको बीचमा के थियो।
अन्त्यमा, अर्को गन्तव्यको लागि यात्रा शुरू गर्नु अघि, त्यो याद राख्नुहोस् किंगस्टन भनेको यो हो, रमको राजधानी मध्ये एक हो, त्यसैले त्यहाँ धेरै बारहरू छन् जहाँ तपाईं यसलाई उपभोग गर्न सक्नुहुनेछ: सीआरयू, एजेन्सी बार र लाउन्ज, मकाउ वा महोगनी ट्री बार, डेभन मन्सन भित्र, उदाहरणका लागि।
नेग्रिलको परिदृश्य शानदार छ, एक सुन्दर तटवर्ती रेखाको साथ जुन होटल र रेस्टुरेन्टहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिएको छ। नेग्रिलमा तपाईंले जमैकामा सबैभन्दा प्रसिद्ध बिचहरू भेट्टाउनुहुनेछ: सात माइल बीच, सेतो बालुवा र क्रिस्टल सफा पानीको। यहाँ होटल र रिसोर्टहरू निर्माण गरिएको छ र समुद्र तटमा तपाईं उपकरणहरू भाडामा लिन सक्नुहुन्छ स्नोर्कल, तालिकाहरू windsurf वा गर्नुहोस् प्याराग्लाइडि।.
ठ्याक्कै एक चट्टानी चट्टानमा एक बार हो जुन अत्यन्त लोकप्रिय छ: रिकको क्याफे। तपाईं समुद्र तटबाट यसको चट्टानमा उत्खनन गरेर माथि जानुहुन्छ र तपाईं केहि पिउन वा केही खान सक्नुहुन्छ जब तपाईं हेर्नुहुन्छ कि कसरी सबै भन्दा साहसी विभिन्न उचाइबाट समुद्रमा उफ्रन्छ।
त्यसैले नेग्रिलमा तपाईं घाम डुब्नबाट डाइभि or वा स्नोर्कलिंग वा माछा मार्न जान सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि हिंड्न सक्नुहुन्छ खूनी खाडीभनिन्छ, एक साइट जुन समुद्री डाकूहरू बीचको लडाईको साक्षी रहेको छ।
आज यो एक सार्वजनिक समुद्र तट हो जहाँ केहि होटल र रूखहरू छन् जुन राग्ने नुनहरूमा छाया प्रदान गर्दछ। पानी क्रिस्टल स्पष्ट र तातो छ र त्यहाँ सात माइल बीच भन्दा कम मानिसहरू छन्। किंगस्टन पहिले, त्यसपछि नेग्रिल र तपाईं यहाँ हुनुभएको कारण तेस्रो गन्तव्य मोन्टेगो खाडी हुनुपर्छ।
अवस्थित छ नेग्रीलबाट केवल एक घण्टा ड्राइभ र यो अधिक साहसी गन्तव्य हो। मोन्टेगो खाडी यो टापुको दोस्रो ठूलो शहर हो र धेरै रात्रि जीवन र रमाइलो प्रदान गर्दछ। समुद्र तटमा तपाईं आराम गर्न सक्नुहुन्छ, सनबेट गर्न सक्नुहुन्छ, गतिविधिहरू गर्न सक्नुहुन्छ वा घोडा सवारीमा जान सक्नुहुन्छ, तर यसको बाहिर तपाईं जgle्गलमा घुम्न जान सक्नुहुन्छ र लोकप्रिय गुलाब हल जस्ता प्रेतवाधित हवेलीहरू हेर्नुहोस्।
गुलाब हल एक हो पुरानो रोपण जसको घर समुद्रको माथिल्लो पहाडमा बनाइएको छ। यो शैली मा जर्जियाई छ र १ 1770 २। मा निर्माण गरिएको थियो। किंवदन्तीमा यो छ कि यसको मालिक, एनी पाल्मर, रोज हलको ह्वाइट डायन, उनको सुन्दरता कायम गर्नका लागि उनका तीन पति र सामयिक दासलाई मारे।
दिन र रात निर्देशित भ्रमणहरू छन्। अर्को गन्तव्य समुद्र तट हुन सक्छ डाक्टरको Cave, जमैका को यस भाग मा एक धेरै लोकप्रिय छ।
एउटा खाडीमा यसको स्थानले पानी अत्यन्त शान्त र तातो बनाउँदछ र समुद्र तट सार्वजनिक छ तर तपाईं सूर्य लाउन्जर र छाताहरू भाडामा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ हासेन्ट राफ्टिंग मार्था ब्रा नदी यो तपाईंको निपटानमा छ, मोन्टेगो खाडी देखि एक घण्टा, ट्रेवलनीको छिमेकको पारासीमा। यो टापुमा सबैभन्दा ठूलो नदीहरू मध्ये एक हो र राफ्टि great उत्तम छ। भ्रमणले सँधै त्यहाँ यातायात समावेश गर्दछ।
तपाईलाई मन पर्छ Luminescence संग लग्नेहरू? साथै ट्रेलानीमा पानीको साथ एक ताल छ जुन रातमा चम्किन्छ। पानी हजारौं सूक्ष्मजीवहरू द्वारा बसोबास गर्दै छन् र तिनीहरूलाई चम्किरहेको हेर्नु यो एक ठूलो अनुभव हो।
मोन्टेगो खाडीबाट डेढ घण्टा, ओचो रियोसले तपाईंलाई पर्खिरहेको छ। यहाँ पर्यटन को लागी घुम्न जान्छ मिस्टिक माउन्टेन भ्रमण गर्नुहोस्जहाँ तपाईं स्की लिफ्टको साथ ट्रेटोपहरूको पछाडि जानुहुन्छ, एक क्याफेटेरिया भएको पानोरामिक साइटमा जानुहोस् जुन तपाईंलाई सागर र ग्रामीण इलाकाको सुन्दर छवि प्रदान गर्दछ।
को डन फल्स तिनीहरू यहाँ छन् क्यारेबियनमा सब भन्दा सुन्दर। १ 1657 मा अ and्ग्रेजी र स्पेनिशहरूले यस साइटमा मृत्युको सामना गरे। को मल्लार्ड्स बीच यो सेतो बालुवा र एक धेरै मानिसहरू संग एक सुंदर समुद्र तट हो।
यदि तपाईं अर्को प्रकारको पैदल यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले भ्रमणको लागि साइन अप गर्न सक्नुहुन्छ आगो, मात्र 45 XNUMX मिनेट पूर्वमा। यहाँ नाटककार र रचनाकार सर नोउल काउर्डको घर छ र तपाईं भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ, बाहिर निस्कँदा वा पछाडि, सद्भाव हल.
मैले सुरूमा भनेझैं यस्तै हो १ 40 s० को दशकमा लोकप्रिय अभिनेता एरोल फ्लान जसले ठूलो सफलताका साथ समुद्री डाकू चलचित्रहरू खेलेका थिए, उनले आफ्नो छुट्टीहरू रियो ग्रान्डेमा राफ्टिंगमा बिताए। नजिकै छन् बोस्टन र सैन स्यान तटहरू, केहि खान रोक्नको लागि आदर्श।
त्यहाँ धेरै सम्भव सर्किटहरू छन्। केही पर्यटकहरू मोन्टेगो खाडी हुँदै प्रवेश गर्छन् र त्यहाँबाट ओचो रियोस वा नेग्रिलमा सर्छन्। सत्य यो हो कि एक हप्तामा तपाईं जमैका र यसको उत्कृष्ट गन्तव्यहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। सधैं सावधान हुनुहोस् यदि तपाईं एक्लै सर्ने निर्णय गर्नुभयो र यदि सम्भव छ भने, यात्रामा राम्रो छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » जमाइका » जमैकामा एक हप्ता आनन्द लिनुहोस्